Hadalhayn xoog leh oo ka dhalatay in Somaliya heshay Drones-ka Turkiga | Dhacdo
Home Uncategorized Hadalhayn xoog leh oo ka dhalatay in Somaliya heshay Drones-ka Turkiga
Hadalhayn xoog leh ayaa ka dhalatay warka sheegaya in Dowladda Turkiga ay Villa Somalia ugu deeqday tiro ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi farsameeyo.
Dadka wax ku qora barraha bulshada ayaa markii ugu horeysay warkan faafiyay, iyagoo markaasi sheegaya inay ka soo xigteen ilo ku dhow dhow Dowladda Federaalka.
Shirkadda dalka Turkiga laga leeyahay ee Bayraktar ayaa farsameysa drones-ka uu nooceedu yahay TB2, waana middii sanad ka hor ay Dowladda Azerbaijan guusha kaga gaartay Armenia.
Sidoo kale diyaaradahan ayaa dhawaan door weyn ka qaatay hawlgalada militari ee jabhadaha TPLF ka mid tahay looga saaray Gobolada Canfarta iyo Amxaarada.
Bayraktar TB2 oo aad uga tayo wanaagsan diyaaradaha drones-ka ee wadamada horumaray qaarkood farsameeyaan ayaa loo adeegsadaa hawlgalada militari iyo howlaha basaasnimada la xiriira. Diyaaradahan waxay qaadi karaan gantaalaha waaweyn ee burburinta dhufeysada loo adeegsado. TB2 oo culeyskeedu yahay 150kg ayaa halkii mar duuli karta masaafo dhan 300km.
Illaa iyo hadda ma jirto wax wara oo Dowladda Federaalka ka soo baxay, kuna xaqiiinayso inay heshay diyaaradahaasi iyo in kaleba.
Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha ee Somaliya, Cabdi Faarax Juxa ayaa ka mid ah siyaasiyiinta walaaca ka muujiyay warka sheegaya in dowladdu heshay diyaaradahaasi.
“Xukuumad muddo-xileedkeedii sharciga ahaa dhamaaday, xoog; xeelad iyo xoolo waxay haysana u jahaysay la dagaalanka dadka aragti ahaan iyada ka duwan maxaa laga filan karaa hadday Drones hesho? Maloo arki karaa in Drones-ku qayb weyn ka yahay cago-juglaynta iyo boobka kuraasta doorashada.” Ayuu yiri Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha ee Xukuumaddii Xasan Cali Khayre.
Juxa oo warkan ku sheegay bartiisa Facebook ayaa yiri “Hadday arrintaasi dhab tahay waxaa la oran karaa waa Aalad hubeed khatar ah oo gashay gacan khaldan oo aan aamin ahayn. Turkiga waxaa laga rabaa inay arrintan beeniso ama khatarteeda dadban damaanad ka bixiso. Waa nasiib darro in Soomaalidu cadowgooda dhabta ah iyo dowladooda isku si’ uga cabsadaan, ugana aamin baxaan.”
Dadka ka aragtida duwan siyaasiyiinta ku fekerka ah Juxa ayaa sheegaya in diyaaradahan ay Dowladda Federaalka ka caawin doonaan la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Previous articleRooble oo la kulmay odayaal reer waqooyi ah (SAWIRRO)
Next articleDooddii Gudoomiye Cabdi Xaashi oo xal laga gaaray
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo qaabilay Wasiir Foosiya